Jawaari oo sheegay in maalinta Isniinta la hor keenayo mooshinka, loona dulqaadan doonin fowdo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mr Jawaari ayaa sheegay in intaan ka badan uusan sii heyn karin mooshinka oo muddo 15 cisho uu Gudoonka loo soo gudbiyay ilaa iyo hadana ay suura geli la’dahay in la horkeeno baarlamaanka.
“Hadii Alle yiraahdo maalinta Isniinta waxaa furmi doona kulankii baarlamaanka mooshinka muddo 15 cisho ayaa laga joogaa markii nala soo gudbiyay intaan kadib ma sii heyn karo”ayuu yiri Gudoomiye Jawaari.
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin Xildhibaanada buuqa iyo fowdada ay sameynayaan, isla markaana tallaabo uu ka qaadayo
“Xildhibaan walba waxaa laga doonayaa inuu xilkiisa guto, mana yeelanayo mana u dulqaadanayo wax buuq iyo wax is horistaag waana ceeb inaan taas iska joojino nagala rabaa ilaa iyo hada xildhibaanada nidaamka ilaaliyay aad ayay u mahadsan yihiin”ayuu yiri Jawaari.
Labadii jeer ee u dambeysay ayuu qabsoomi waayay kulankii Baarlamaanka, kadib markii uu buuq iyo fowdo hareeyay mooshinkii loo soo gudbiyay, iyadoo tan iyo mudadaas uu khilaafka jirayna uu saameeyay hey’adaha dowladda.